तीन करोड नेपालीलाई आयो खुसिको खबर : धुर्मुसले पुनःनिर्माण मन्त्रालय मागेपछि ओलीले दिए एकाएक यस्तो खुशीको खबर ! (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्) | DON Nepal तीन करोड नेपालीलाई आयो खुसिको खबर : धुर्मुसले पुनःनिर्माण मन्त्रालय मागेपछि ओलीले दिए एकाएक यस्तो खुशीको खबर ! (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्) – DON Nepal
Home अन्तर्वार्ता तीन करोड नेपालीलाई आयो खुसिको खबर : धुर्मुसले पुनःनिर्माण मन्त्रालय मागेपछि ओलीले दिए एकाएक यस्तो खुशीको खबर ! (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)
तीन करोड नेपालीलाई आयो खुसिको खबर : धुर्मुसले पुनःनिर्माण मन्त्रालय मागेपछि ओलीले दिए एकाएक यस्तो खुशीको खबर ! (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)
By Don NepalMar 19, 2018, 19:04 pm0
काठमाण्डौ – समाजसेवी तथा कलाकार सितारम कट्टेलले देश विकासका लागि आफू जस्तोसुकै भुमिका पनि निर्वाह गर्न सक्ने बताएका छन् ।
ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै कलाकार कट्टेलले आफू काम गर्न सक्षम रहेको बताएका हुन् ।
आफ्नो नजरमा जे काम पनि सम्भव भएको बताउँदै कट्टेलले पछिल्लो समय आफूले गरेको कामको अनुभवले पुनः निर्माण र भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी ज्ञान हासिल गरेकाले देशका लागि आवश्यक परेको खण्डमा तयार रहेको बताए ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पुनः निर्माण मन्त्रालयको जिम्मा पाउनुभयो भने के गर्नुहुन्छ भन्ने धमलाको प्रश्नमा कट्टेलले पुनः निर्माणको मात्र नभै राष्ट्रनिर्माणको जिम्मेवारी सरकारले दिन्छ भने तयार रहेको बताए । “मैले गर्न नसक्ने केही पनि छैन जस्तो लाग्छ ।” उनले भने ।
भूकम्पपछिको पुनः निर्माणको काम सरकारले सन्तोषजनक रुपमा गर्न नसकेको बताउँदै कट्टेलले सरकारी निकायबिच योजना र प्रतिवद्धताको खाँचो रहेको बताए । भौतिक पूर्वाधार निर्माण मन्त्रालय तपाईले पाउनुपर्छ, यसमा सहमत हुनुहुन्छ रु भन्ने धमलाको प्रश्नमा कट्टेलले हाँस्दै भने, “देशको विकास र पुनः निर्माणलाई गति दिनका लागि हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ ।”
पछिल्लो समय नमुना नेपाल निर्माण अभियानमा आफूहरु केन्द्रित रहेको बताउँदै उनले सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरुलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
नमुना नेपाल निर्माणको काम निकै चुनौतिपूर्ण भएको भन्दै उनले काम गरौँ भावना भएकाले सफल बनाउन सकिने बताए । “धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसन धुर्मुस र सुन्तलीको मात्रै होइन । समग्र नेपालीहरुको हो । त्यसैले हामी सफल हुन्छौँ ।
डिपिआर निर्माणका लागि अहिले काम सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिए । नमुना नेपाल निर्माणपछि नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय समुदायले महत्वका साथ हेर्ने उनको दाबी छ । सरकारले पनि नमुना नेपाल निर्माण अभियानमा सहयोग गर्ने विश्वास उनले गरेका छन् ।
‘वर्षेनी एक खर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात रोक्न सकियो भने व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ’
काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न उर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाइने बताएका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सोमबार आयोजित स्वागत समारोहमा मन्त्री पुनले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा मात्रै वर्षेनी एक खर्ब बराबर विदेशिने गरेको तथ्यांक पेश गर्दै नेपाली जनताको चुलोसम्म प्रभाव पर्ने विषयमा गम्भीर भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘वर्षेनी एक खर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयातमात्रै रोक्न सकियो भने मात्रै पनि व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ’, उनले भने– ‘दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि ऊर्जा क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान हुने भएकाले सरकारले यसमा विशेष कार्ययोजनाका साथ लगानी गर्ने र प्राथमिकता दिनेछौं।’
प्राधिकरणका कर्मचारीलाई परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिँदै उनले प्राधिकरणको प्रणालीमा रहेको चुहावट नियन्त्रण गर्न, लामो समयदेखि रोकिएका आयोजना तत्काल सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे।
सरकारले एकाध वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरेको भन्दै त्यसको आधार ऊर्जा नै भएकाले इमान्दार भएर काम गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलगायत सबै कर्मचारीलाई मन्त्री पुनले निर्देशन दिए।
उनले भने, ‘लामो समयदेखि कुलेखानी तेस्रो निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। माथिल्लो त्रिशूली ‘ए’ आयोजनाको अवस्था उस्तै छ। माथिल्लो तामाकोशी आयोजनासमेत लयमा छैन भन्ने सुनेको छु। अब कुनै पनि आयोजना रोकिनु हुँदैन। समयमा सकिनु पर्छ।’ मन्त्री पुनले ऊर्जामा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा विशेष लगानी जरुरी रहेको स्पष्ट पारे।
बत्ती बालेरमात्रै समृद्धि नआउने भएकाले उनले ऊर्जाको विविधीकरण तथा प्रयोगको दायरासमेत बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले नेपाललाई समृद्ध र आर्थिक रुपमा सबल बनाउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका ऊर्जा क्षेत्रकै हुने भएकाले सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनाका साथ काम गर्ने स्पष्ट पारे।
आगामी १० वर्षमा कम्तीमा पनि १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै मन्त्री पुनले सबैको सकारात्मक र सार्थक प्रयत्नबाट मात्रै त्यो लक्ष्य हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत वर्षदेखि पूर्णरुपमा लागू भएको विद्युत्भार कटौतीले सकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै अब व्यवस्थित र विद्युत् विस्तार प्रणालीमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले सरकारी र निजी क्षेत्रको सकारात्मक प्रयासका कारण मुलुकमा सकारात्मक परिणाम आएकाले आगामी दिनमा थप व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा मन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराए। रासस
सोमबार पहिलोपटक नेपालमा उडान गरेर आएकी बंगला एयरलाइन्सकी को-पाइलट पृथुला रसिद जसले नेपालको भुमिमा टेक्न नपाउदै संसार छोडिन। पहिलोपटक नेपालमा फ्लाइट भएकै कारण उनि निकै उत्साहित थिइन्।
तर उनको उत्साह केहि घण्टा पनि टिकेन। पृथुला चलाएको जहाज काठमाडौँको धावनमार्गमा यसरी पछारियो कि अब पृथुला यो संसारमा कहिले नफर्किने गरि गईन् ।
पृथुलाले सन् २०१६ को जुलाईमा युएस बंगलामा आफ्नो करियर सुरु गरेकी थिइन् । बंगलादेशको नर्थ साउथ युनिभर्सिटीबाट उडान सम्बन्धी पढाई सकेपछि उनले फस्ट अफिसरका रुपमा युएस बंगला एयरलाइन्समा जागिर सुरु गरेकी थिइन् ।
बंगलादेशको आकाशमा डेढ बर्ष बिताएकी पृथुलाले एशिया र अमेरिकाका आकाशमा कोपाइलट भएर जहाज उडाइन् । धावनमार्गबाट घाइते अबस्थामा उद्दार गरिएकी पृथुलाको काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामंगलमा उपचारका क्रममा ज्यान गयो ।
नयाँबाटो/ संवाददाता |काठमाडौं, चैत ५ – टीकापुर घटनाका मुख्य आरोपी भएको अभियोगमा जेल चलान गरिएका रेशम चौधरीले सांसदको शपथ खान मिल्छ ? अदालतले त मिल्दैन भनिसक्यो । तर सरकार उनलाई शपथ खुवाउने तयारीमा जुटेको चर्चा हुन थालेको छ ।
चौधरीलाई शपथ गराउन राष्ट्रिय जनता पार्टीले चर्को दबाब दिइरहेको छ । राजपा नेता केशव झाले चौधरीको शपथ ग्रहणबारे सरकारसँग सकारात्मक छलफल भैरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार चौधरीलाई जेलभित्रै शपथ गराउने वा बाहिर गराउने भन्नेबारे निर्णय भइसकेको छैन ।
अभियोग लाग्दैमा कुनैपनि व्यक्ति दोषी हुन नसक्ने भन्दै उहाँले जनमतको सम्मान गरेर चौधरीलाई शपथ गराउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । ‘चुनाव लड्न चाहिँ पाउने, अनि शपथ ग्रहन गर्न चाहिँ नपाउने ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘कानून बनाउने प्रमुख दलहरुले किन यसमा ख्याल गरेनन् ?’
झाको प्रश्नमा केही दम छ । तर पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेको ब्यक्तिलाई जेलमै गएर सांसदको सपथ गराउने कुरा त गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भनेजस्तै हुनेछ । जबकि, उनलाई भोली अदालतले दोषी ठहर गरे उनको पद स्वतः समाप्त हुनेछ र सांसदका लागि नयाँ चुनाव गराउनुपर्नेछ ।
चौधरीलाई शपथ ग्रहण गर्न कुनैपनि कानूनी व्यवधान नरहेको राजपाको दाबी छ । सर्वाेच्च अदालतले चौधरीको तर्फबाट प्रमाणपत्र लिन वारेसलाई दिएको निवेदन मात्र खारेज गरेको, तर शपथ नगराउनु भन्ने कुनै आदेश नदिएको राजपा नेता झाले जिकिर गर्नुभयो ।
यस्तै कैलाली जिल्ला अदालतको फैसलामा पनि त्यस्तो केही नभनिएको र मुद्दा पनि प्रमाणित भैनसकेको कारण साधारण तारेखमा छाडेर शपथको वातावरण बनाउन आफूहरुले सरकारसमक्ष माग गरेको नेता झाले बताउनुभयो ।
अदालती प्रक्रियाबाहेक सबै मुद्दा फिर्ता लिएर चौधरीलाई शपथ खुवाउने वातावरण बनाउन सरकार सकारात्मक भएको उहाँको भनाई छ । यसबारे सरकारको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । तर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले अस्पतालमै पुगेर चौधरीलाई जुश खुवाएपछि सरकार नरम भएको संकेत मिलेको छ ।
राजपालाई सरकारमा सहभागी गराउनकै लागि उसको माग अनुसार चौधरीलाई शपथ खुवाउन लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको आलोचना पनि हुन थालेको छ । हुनपनि अदालतले जेलमा पठाएको ब्यक्तिलाई बहालवाला गृहमन्त्री जुस खुवाउँदै हिँड्नु नैतिक विचलनको पराकाष्ठा हो ।
शपथको वातावरण मिलाउन नै चौधरीलाई कैलाली कारागारबाट काठमाडौं ल्याइएको स्रोतको दाबी छ । यसका लागि उनले गजबको अभिनयको सहारा पनि लिए । शुरुमा जेलभित्रै अनसन बसे, केही दिन केही नखाएपछि विरामी परे र त्यही बहानामा फागुन २६ गते काठमाडौको वीर अस्पतालमा भर्ना गरिए ।
अस्पतालमै पुगेर गृहमन्त्रीले जुस खुवाएर अनसन तोडाउनुभयो । जतिबेला गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अदालती प्रक्रिया बाहेक सबै मुद्दा फिर्ता लिने आश्वासन दिनुभयो । कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित चौधरीले निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन् ।
निर्वाचन आयोगले चौधरीको प्रमाणपत्र उनलाई र उनको वारेसलाई नदिई संसद सचिवालयमा पठाइदिएको छ । ‘वारेस’ मार्फत नै चुनावमा मनोयन गर्दा गराएका चौधरीले वारेसमार्फत नै प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गराउन खोजेपनि अदालतले व्यक्ति स्वयं उपस्थित भए मुद्दा हेर्न सकिने, नत्र अदालतले नहेर्ने भन्दै रिट दरपिट गरिदिएको थियो ।
लामो समय फरार भएका चौधरीले अन्ततः कैलाली जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएर आत्मसमर्पण गरेका थिए ।
सत्ता र मुद्दाको सम्बन्ध
प्रधानमन्त्री ओली र राजपाका नेताहरुबीचको सम्बन्ध घनिष्ट हुँदै जानुमा आआफ्नै स्वार्थ छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ता बलियो र टिकाउ बनाउनुपर्नेछ भने राजपालाई मौकाको फाइदा उठाएर आफ्नो नेता कार्यकर्ता छुटाउनुपर्नेछ ।
विगतमा एमाले विरुद्ध निषेधको राजनीति गरेको राजपा अहिले ओली सरकारसँग घनिष्ट सम्बन्ध विस्तार गर्दैछ । राजपाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदमा विश्वासको मत दिएर सरकारको समर्थन जनाइसकेको छ । त्यसैको गुन तिर्न प्रधानमन्त्री ओलीले रेशम चौधरीलाई शपथ गराउन खोजेको चर्चा सुरु भएको छ ।
सरकारले चौधरीको शपथको वातावरण मिलाएपनि अदालतमा मुद्दा रहेकाले उनी निलम्बित सांसदका रूपमा रहने कानून ब्यवसायीले बताएका छन् ।
०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा आन्दोलनरत थरुहट कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडपमा एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो । त्यो काण्डदेखि फरार भएका चौधरीले आफूमाथि लागेको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
ओली सरकारमाथि उठेको प्रश्न
रेशम चौधरीमाथि लागेको अभियोगको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । तर सरकारले भने राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दालाई कमजोर बनाउन खोजेको चर्चा हुन थालेको छ ।
अभियुक्त चौधरी दोषी हुन् या निर्दाेष भन्ने कुरा अदालतको फैसलापछि टुंगिने भएकाले अहिले शपथ ग्रहणका नाममा सरकारले मुद्दालाई ओझेलमा पार्न खोजेको कतिपयको तर्क छ । राजनीतिक आवरणमा हुने कुनैपनि आपराधिक क्रियाकलाप क्षम्य नहुने बताएका प्रधानमन्त्री ओली चौधरीको विषयमा मौन रहनुभएको छ ।
राजपाको चर्काे दबाब र सरकारमा मधेशवादी दलको पनि समर्थन कायम राख्न प्रधानमन्त्री ओलीपनि चौधरीलाई शपथ गराउन लचिलो हुनुभएको हो कि भन्ने आशंका छ । शान्तिसुरक्षा कायम गरि आपराधिक क्रियाकलाप निमिट्यान्न पार्ने उदघोष गरेका ओलीमाथि यक्ष प्रश्न खडा भएको छ ।
दण्डहीनतालाई प्रश्रय कहिलेसम्म ? सरक्षाकर्मीको ज्यान लिने काण्डका मुछिएका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिंदा प्रहरी संगठनमा कस्तो असर पर्ला ? दुईतिहाई बहुमतको सरकार विकास, समृद्धि, सुशासन र शान्तिसुरक्षा कायम गर्न कि आपराधिक क्रियाकलापलाई बढवा दिन ?
Previous Postआजको राशिफल: वि.सं. २०७४ चैत्र ०६ गते मङ्गलबार तदनुसार ई. सं. २०१८ मार्च २० तारिख Next Postयुएस बाङ्ला विमान दुर्घटनाका दुई घाइते आफ्नो घर फर्किए !